ကလေးတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ Rotavirus ကြောင့် ဝမ်းလျှောခြင်း | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
မိခင်၊ ဒါမှမဟုတ် ကလေးရဲ့ မသန့်ရှင်းတဲ့လက်နဲ့ ကလေးပါးစပ်ကို ကိုင်မိတာနဲ့ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ မသန့်ရှင်းတဲ့လက်နဲ့ အစားအစာတွေ ကျွေးမွေးတာ၊ မသန့်တာတွေ စားမိတာ ဒါတွေက အဓိကကူးစက်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းပါ။ နို့မှုန့်တိုက်တဲ့ကလေးတွေဆိုရင်လည်း နို့ဘူးတွေကို သေချာမဆေးကြောတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Bioflor IA 1
>> ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ?
အစောပိုင်းလက္ခဏာတွေအနေနဲ့ ဖျားပြီး အန်မယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ဝမ်းအရည်တွေ သုံးရက်ကနေ ခုနစ်ရက်အထိ သွားနိုင်တယ်။ တချို့ကလေးတွေမှာတော့ ဗိုက်နာတာပါ တွဲရှိတတ်ပါတယ်။
>> နောက်ဆက်တွဲ ဘာတွေဖြစ်နိုင်သလဲ?
Rotavirus ကြောင့် ဝမ်းလျှောတာဟာ များသောအားဖြင့်တော့ အရည်များများတိုက်ပြီး ကုသပေးလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဝမ်းသွားတာ အရမ်းဆိုးပြီး ရေဓာတ်ပြန်မဖြည့်နိုင်ဘူးဆိုရင် ရေဓာတ်ခန်းခြောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ လိုအပ်တဲ့ကုသမှုတွေသာ အချိန်မီမရခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ အသက်အန္တရာယ် ရှိပါတယ်။
>> ဘယ်အချိန်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသင့်သလဲ?
● ကတ္တရာစေးလို ဝမ်းမည်းမည်းတွေသွားရင်
● ကိုယ်အပူချိန် 102°F နဲ့အထက်ရှိရင်
● ကလေးဟာ မောပန်းနေတယ်၊ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်နေတယ်၊ နာကျင်နေတယ်လို့ထင်ရင်
● နှုတ်ခမ်းခြောက်တာ၊ ငိုရင် မျက်ရည်မထွက်တာ၊ ဆီး မည်းသွားတာ၊ ဆီး လုံးဝမသွားတော့တာ၊ မှိန်းလွန်းတာ အစရှိတဲ့ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်တဲ့လက္ခဏာတွေ ရှိလာရင်
ဒီလိုအချက်တွေရှိရင်တော့ ကလေးကို ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ဆုံး ပြသသင့်ပါတယ်။
Bioflor IA 2
>> Rotavirus မကူးစက်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲ?
မသန့်ရှင်းတဲ့လက်ကနေတစ်ဆင့် ကူးစက်တာဖြစ်လို့ ကလေးရော၊ ကလေးကိုပြုစုနေတဲ့သူတွေပါ မကြာခဏ လက်ဆေးပါ။ ဒါ့အပြင် Rotavirus ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးလည်း ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း (WHO) ကတော့ အသက်တစ်နှစ်အောက်ကလေးတွေကို Rotavirus ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။
ကလေးတွေမှာ Rotavirus ကြောင့် ဝမ်းလျှောတဲ့အခါ မိဘတွေဘက်က ဝမ်းပိတ်ဆေးတွေ၊ ပိုးသတ်ဆေးတွေ မတိုက်မိစေဖို့နဲ့ Probiotics ဖြည့်စွက်စာတွေ တိုက်ပေးဖို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးသင့်ပါတယ်။ Probiotics တွေဟာ အူလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ မကောင်းတဲ့ပိုးမွှားတွေကို တိုက်ထုတ်ပေးမယ့် အကျိုးပြုပိုးမွှားလေးတွေကို အားဖြည့်ပေးလို့ ဝမ်းသွားတာကို မြန်မြန်သက်သာစေမှာပါ။ Saccharomyces boulardii CNCM l-745 တစေးမှိုပါဝင်တဲ့ Bioflor လို Probiotics တွေဟာ Rotavirus နဲ့ တခြားရောဂါပိုးတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဝမ်းလျှောတာကို ကာကွယ်ပေးနိုင်လို့ ဝမ်းလျှောတတ်တဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေအတွက် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ အာဟာရဓာတ်စာလေးဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူးနော်။